အသက်၄၀မှ စာအုပ်လက်ပွေ့ရောင်းကာ အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာသူ
၁၉၄၀ တွင်မွေးသည်. အသက် ၁၈ နှသ်အရွယ်တွင် လယ်ယာအတွေးအခေါ် လွမ်းမိုးသည် ဆိုပြီး ကျောင်းထုတ်ခံရသည်။ နော်ကသုံးနှစ်အကြာတွင် အရင်းရှင်ဝါဒ ကိုင်းညွတ်သည်ဆိုကာ ထောင် ၉ လ ချခံရသည်။
အသက် ၂၃ ရောက်သောအခါသူငယ်ချင်း ဖြစ်သူကို အမေရိကန် သွားနိုင်ရန် ကူညီမိ သောကြောင့် သစ္စာဖောက်ဟု တံဆိပ် တပ်ပြီး အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ်နှစ်ဆယ် ချခံရပြန်သည်။ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်တွင် ထောင်မှ လွတ်လာသည်။
ထောင်မှလွတ်လာချိန်တွင် ဝန်ထမ်းလုပ်ရန် စစဉ်းစားသည်။ တိန့်အာဏာရသွားပြီး စီးပွားရေး မူဝါဒ ပြောင်းလဲမည် ဟု သတင်းကြား၍ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ထူထောင်ရန် ကြံစည်သည်။ အစိုးရဆီမှ အသေးစား ချေးငွေ ချေး၍ စာအုပ်လက်ပွေ့ ရောင်းသည်။ ဝန်ထမ်းဘဝထက် ဝင်ငွေပိုရ လာသည်။ မကြာမီ စာအုပ်ဆိုင် ပိုင်ရှင် ဖြစ်လာသည်။
စာအုပ်ဆိုင် ထိုင်ရင်း အသွားအပြန် လုပ်နေသော လူများကို ကြည့်ကာ မော်တော် ဆိုင်ကယ် ရောင်းရင် ကောင်းမလား ဟု အတွေး ပေါ်လာသည်။ ထိုနောက် ၁၀ နှစ်နီးပါး လုပ်ကိုင်ခဲ့သော စာအုပ်ဆိုင်ကို ရောင်းချကာ ဆိုင်ကယ် စတင် ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်သည်။
အသက် ၅၂ အရွယ် ၁၉၉၂ တွင် ယင် သည် ဝန်ထမ်း ၉ ယောက်ငှားကာ ချုံကင်း မြို့တွင် ဆိုင်ကယ် ထုတ်လုပ်ရန် စတင်သည်။ ကနဦး ရင်းနှီးငွေ (ဒေါ်လာ ၃၆၀၀၀) ဖြစ်သည်။ ဂျပန် ဟွန်ဒါ (Honda) ကို သဘောကျ၍ သူဆိုင်ကယ်ကို (Hongda) ဟု ဆင်တူယိုးမှား နာမည်ပေးသည်။
မကြာမီ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်လာသည်။ ထိုနောက် ဈေးကွက် ကို မခန့်မှန်းဘဲ ယုံကြည်မှု လွန်ကဲပြီး ဆိုင်ကယ် ၁၅ သန်းထုတ်လိုက်ရာ ၅ သန်းသာ ရောင်းထွက် ပြီး ကျန် ဆိုင်ကယ် ၁၀ သန်းကို သံရည်ကျို ဈေးဖြင့် ရောင်းလိုက်ရသည်။ စီးပွားပျက်မလို ဖြစ်သွားချိန်တွင် ဂျပန်ကုမ္ပဏီ ဟွန်ဒါမှ ဆင်တူယိုးမှား နာမည် သုံးသဖြင့် တရားစွဲခံရသည်။
ယင် သည် ဇွဲမလျော့ဘဲ ဆက်ကြိုးစား ပြန်သည်။ မကြာခင် ပြည်တွင်းတွင် ဆိုင်ကယ် ထုတ်လုပ် သည့် စက်ရုံပေါင်း တစ်ထောင် ကျော်ဖြစ်လာ ပြန်ရာ ဈေးကွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန် လာသည်။ ထိုကြောင့် ဗီယက်နမ် ဈေးကွက် သို့ ဝင်ရန် ကြိုးစားသည်။
ဗီယက်နမ် တွင် ဂျပန်ကုမ္ပဏီ ဟွန်ဒါက ဈေးကွက် အုပ်ထားသည့် အပြင် ယင်၏ Hondga နာမည်ကို တရားစွဲ ထားသောကြောင့် နာမည်သစ် လီဖန်း (Lifan) ကို သုံးကာ ဝင်ပြိုင်ရာမှ မထင်မှတ်ဘဲ ဈေးကွက်သစ် ရရှိ အောင်မြင် ခဲ့သည်။
ယခုအသက် ၇၅ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သော ယင်သည် တရုတ် ၏ အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များမှ တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီး ဝန်ထမ်း ၅၀၀၀ ကျော်ကို အလုပ်ခန့် ပေးထားနိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ ချုံကင်း ပြည်နယ် အစိုးရအကြံပေး အဖွဲ့၏ ဒုဥက္ကဌ လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၂ မှ စ၍ ယနေ့ထိ လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်း များ အတွက် ယွမ် (၆၄၁၃) သန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စာရင်း အရ လီဖန်း ဆိုင်ကယ်နှင့် လယ်ယာ သုံး စက်များ၊ ကားများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ သို့ ယွမ် (၁၂.၁၆) ဘီလီယံဖိုး ရောင်းချခဲ့ရသည်။
ငယ်ဘဝ နှစ်နှစ်ဆယ် ကို အပြစ်မရှိဘဲ ထောင်ထဲတွင် အချိန်ကုန်ခဲ့ရသော၊ အသက် ၄၀ မှ စီးပွားရေး စလုပ်ခဲ့ရသော၊ အရှုံးများစွာ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရသည့် စာအုပ် လက်ပွေ့ ရောင်းသူ သည် နောင် ၂၅ နှစ် အကြာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင်တော့အစိုးရသို့ အခွန် ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ဆောင်နိုင် သည့် လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်လာ သည်။ သူသည် မိခင်တိုင်းပြည် အတွက် အရှုံးမပေး တတ်သော ကျားကုတ် ကျားခဲ ဇွဲကြီးလှသည့် စိတ်ဓာတ် ပိုင်ရှင် သားကောင်းတစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးမကျတဲ့လူ မဖြစ်စေနဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိ ခင်ဗျားဟာ တီဗီလေး ကတ်ဆက်လေးတစ်လုံးတောင် မပိုင်သေးတဲ့ အခါ ဘယ်သူမှ ခင်ဗျားကို သနားနေလိမ့်မယ် မထင်နဲ့။
ဈေးကွက်ထဲ ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့် ခင်ဗျား ကျရှုံးခဲ့တဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်ပြိုင်ဘက်ကမှ ခင်ဗျားကို ကိုယ်ချင်းစာတရား ဆိုပြီးတော့ ရှော်ပေးလိမ့်မယ် မထင်နဲ့။ ကလေးကွက်နင်းနေတဲ့လူ စီးပွားရေး လောကမှာ တစ်ယောက်မှ မပါဘူး။
ကိုယ့်ချစ်သူက ပိုက်ဆံမရှိလို့ လမ်းခွဲသွားတဲ့အခါ ဘယ်သူကမှ ခင်ဗျားကို စာနာလို့ဆိုပြီး ကြယ်ငါးပွင့် ဟော်တယ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ပေးမယ် မထင်နဲ့။
မိဘတွေကို ဆေးရုံဆေးခန်း ကောင်းကောင်းမှာ ဆေးကုချင်တယ်။ ဘယ်သူကမှ ခင်ဗျားကို ချစ်လို့ဆိုပြီး တော့ ခင်ဗျားမိဘတွေကို အကောင်းစားဆေးရုံ ပို့ပေးမယ်မထင်နဲ့။
မိသားစုဆင်းရဲလို့ မချမ်းသာတာပေါ့။ ဟုတ်သလား။ အသိပညာမဆင်းရဲစမ်းပါနဲ့။ ဆင်ခြေတွေ အလီလီ ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်သူကများ တော်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ ပိုက်ဆံလာပေးတုန်း… မပေးဘူးနော်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ ရလဒ်ကို ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့လူ ဆင်းရဲမှာပဲ။
ခိုင်မာတဲ့ ဆုံဖြတ်ချက်နဲ့ လျှောက်ရဲတဲ့ သတ္တိမရှိတဲ့လူ ဆင်းရဲမှာပဲ။
စွန့်စားရမှာကို ကြောက်တဲ့လူ ဆင်းရဲမှာပဲ။
ချမ်းသာချင်စိတ် မပြင်းပြတဲ့လူဟာ ဆင်းရဲမှာပဲ။
အသွေးထဲ အသားထဲကနေ ချမ်းသာချင်လာတဲ့လူဟာ နိမ့်ကျမှုတွေ အားလုံးကို ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။ ပျောက်သွားတယ်။ ချမ်းသာဖို့ဆိုရင် ၁၀၀ % အပြည့် ကိုယ့်ခွန်အားကို ထုတ်သုံးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေ ဖြစ်တယ်။
အသွေးထဲ အသားထဲကနေ ချမ်းသာချင်လာတဲ့လူဟာ ကျရှုံးခဲ့ရင်တောင် အဲ့ဒီကျရှုံးမှုကို ဘေးဖယ်ထုတ်ပြီး ဘယ်သူမှ စိတ်မကူးရတဲ့ အားထုတ်ခြင်း အသစ်တစ်ခုနဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ချက်ချင်း ပြောင်းပြန်လှန် ပစ်ချင်သူတွေ ဖြစ်တယ်။
ဒါပဲ ဒီတော့ ခင်ဗျားစဉ်းစားတော့။ ဆင်ခြေတွေ ဘေးဖယ်ထားလိုက်စမ်းပါ။ ခင်ဗျား ရှေ့ဆက်ရမယ့် လမ်းက နှစ်လမ်းပဲ ရှိတယ်။ ငွေပုံရှိရာ လမ်းရယ် အိမ်အပြန် လမ်းရယ်။ နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကို ရွေးရလိမ့်မယ်။ ရပ်မနေနဲ့ ခင်ဗျား အသုံးမကျတဲ့လူ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
Read 1257 times Last modified on Thursday, 11 April 2019 11:17
motivate for successful life
yin ming shan
အောင်မြင်သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်စိတ်အားမြှင့်တင်နည်း ၅ ချက်
သင့်အတွက် လူမှုကွန်ရက်တွေက ဆေးလား၊ ဘေးလား?
Pyin Nyar Pan Eain
Sayar Ye Ko Ko & Sayar Hein Htet Paing